Archive du 20180122
Izay vao taitra Ramatoa minisitra “Hitory an’i Houcine Arfa aho”
Efa 40 taona izao no naha tao amin’ny fitsarana ahy ary andraikitra maro no efa nosahaniko, ary dingana maro no efa nolalovako.
Governemanta Solonandrasana Lasa “gouvernement de dégât” ?
Gouvernement de combat” na koa hoe governemanta hiady mafy ho an’ny fampandrosoam-pirenena no anarana nampisalorana izao governemanta mitsangana ao anaty fitondrana Rajaonarimampianina izao.
Fametraham-pialan’ny praiminisitra Hatramin’ny rahampitso ny fe-potoana ?
Ho raikitra ihany izy ity sa mbola hifampiziriziry sy hifampiandry kendry tohana ny etsy Mahazoarivo sy ny eny Iavoloha ? Io indray ny fanontaniana mipetraka amin’izao fotoana satria efa am-bolana maro no re fa hoesorina ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Madagasikara Mizotra mankany amin’ny tetezamita
Mena ny tondro eto Madagasikara noho ny fahapotehan’ny toekarena miteraka ny korontana ara-tsosialy, ny tsy fandriampahalemana eo amin’ny firenena manontolo ary fahaverezan’ny soatoavina.
Rajaonarimampianina Nanangam-bovona tany Brickaville
Ny sabotsy teo tany Brickaville nandritra ny fitsidihan’ny filoha ireo traboina tany an-toerana, dia namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety mikasika ny raharaha Houcine Arfa Atoa Rajaonarimampianina Hery.
Midegany iray trano
Oh ry Jean sy Jeanne isany a, fa inona ihany ary ity revinareo ity e ! Fa hay ve hanaiky ihany hoe namoaka ilay gadra hitsabo tena e, dia nahoana no tsy efa natao blindé ny mpiambina ..ilay razoky efa nambaranareo hoe gaigilahy.
Voamaina Nahitana fiakarana 300 Ar isan-kilao ny vidiny
Ankoatra ny vidim-bary izay mbola tsy mety midina mihitsy eny amin’ireo mpaninjara madinika, indrindra fa ny vary zana-tany dia anisan’ny mampitaraina fatratra ny mpanjifa ihany koa amin’izao fotoana ny fiakaran’ny vidin’ny voamaina.
CNaPS -FLM Notohizana tany Taolagnaro ny fiaraha-miasa
Filohan’ny FJKM « Hifidy olona matahotra an’Andriamanitra isika »
Vory marobe teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fjkm) omaly, noho ny fanompoam-pivavahana fitondrana am-bavaka ny fiohan’ny Fjkm mivady sy ny ankohonany ary ny taom-piasana 2018 na dia nirotsaka aza ny orana.
Toeram-panofanana mpitandrina eny IVATO Hotokanana amin’ity taona ity, hoy Ravalomanana
Tsy maintsy vita ary hotokanana amin’ity taona 2018 ity ireo tsangambaton’ny faha-50 taonan’ny Fjkm, hoy Atoa Marc Ravalomanana omaly nandritra ny fandraisam-pitenenany teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Telma Super Coupe de Madagascar 2017 Lasan’ny CNaPS SPORT ny 2.000.000 ariary
Lasan’ny CNaPS Sport avy any Itasy ny amboara Telma Super Coupe de Madagascar 2017 eo amin’ny taranja baolina kitra. Resin’izy ireo tamin’ny 1-0 ny sabotsy 20 janoary 2018 teo,
Rugby Gold Top 8 Ny Ftm sy Cosfa no hiatrika ny famaranana
Tontosa soa aman-tsara teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka omaly alahady 21 janoary 2018 ireo lalao ankatoky ny famaranan’ny lalao rugby à XV “Gold Top 8” na fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara karakarain’ny Malagasy Rugby.
TAM Anosibe Nivaingana ny ezaka natao tamin’ny 2017
Nifampiharahaba sy nifampirary soa noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2018 teny Anosizato, ny sabotsy 20 janoary teo, ny fileovana TAM Anosibe rugby manontolo nahitana an’ireo raiamandreny mpitantana, mpanazatra ary mpilalao.
Te hahafanina indray
Amberivatry sy amontana, zahatra sy lakana, valala sy lolo, hatramin’ny sakay sy rony ary anjely sy devoly no toa hezahin’ny fitondrana ankehitriny ampivadiana sy hampiraisina zotra entina hanazavana ny tsy fandehanan-draharaham-pirenena amin’izay laoniny intsony tao anatin’ny efa-taona.
Andohatapenaka “Gare routière” fa tsy tsena
Aoka hazava ny resaka, hoy ny filohan’ny ASTRAM Rakotondrafara Fredinard, manoloana ny fitakiana ataon’ireo fikambanan’ny mpivarotra etsy amin’ny Fasan’ny Karana sy ny mpanera, izay milaza fa ho very fihinanana raha hifindra eny Andohatapenaka ny toby fiantsonan’ireo taksibrosy.
Fanitaran-dalana Anosizato – Fenoarivo RN1 Manjavozavo ny resaka
Anisan’ny resa-be nitana ny sain’ny rehetra tato ho ato ny mikasika ny fanitaran-dalana hatao any amin’iny lalam-pirenena voalohany iny. Miainga etsy Anosizato izy io raha araka ny nambaran’ny filoham-pirenena.
Fahefa-mividin’ny Malagasy Efa tena latsaka ambany
Mahatsapa ny mpivarotra ankehitriny fa mihen-danja tanteraka ny fahefa-mividin’ny Malagasy. Amin’ny lafiny haingo, ohatra, dia nanambara Ramatoa Manitra sy ireo namany mpivarotra ao amin’ny AVANCE CENTER Behoririka fa tsy misy ny tsena raha oharina ny tamin’ny taona 2017.
Miha manankarena hatrany i Chine Niakatra 6.8% ny harinkarena faobe
Anisan’ny vaovao farany nanaitra ny firenena maro ny fiakaran’ny harinkaren’ny sinoa tamin’ny faran’ny herinandro teo. Mihoatra ny tanjona nandrasana tokoa mantsy ny zava-nitranga tany Chine.
Sekoly ambony ISPM Hankalaza ny faha-25 taona niorenany
Feno 25 taona katroka rahampitso talata 23 janoary ny sekoly ambony “Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar” ( ISPM) eny Antsobolo.
C.C.H.A Ahitana fivoarana maro ny fahaizana mozika
Nanatanteraka fanompoam-pivavahana fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ho fanakatonana ny faha-15 taonany ny Cours de Clavier et Chant Hery Andriatahina (CCHA).
Dama Mahaleo Nampitambatra ny kolontsaina Sinoa sy Karana
Tranga hafa kely no niseho teny Andrainarivo ny sabotsy 20 janoary lasa teo. Mpanakanto eo amin’ny sehatry ny mozika no nahafantaran’ny maro an-dRasolofondraosolo Mahaleo na Dama fa sambany kosa izy tamin’io andro io no niditra teo amin’ny sehatry ny kabary. Sambany teo amin’ny fiainany ihany koa no nangata-bady izy.
Gaboraraka sy tsy fandraisan’andraikitra Gadra 130 mahery tsy hita popoka
Rehefa atao ny kajikajy dia gadra mihoatry ny 130 no tafatsoaka ny fonjan’Ambatondrazaka (11), Tsiafahy(5), Antanimora(1), Ikongo (120) nanomboka ny faramparan’ny taona 2017 hatramin’izao,
VAZAHA NISY NAMONO
Teratany vahiny manodidina ny 70 taona no maty nisy namono tao an-tranony, tao Ambohimiaindrisoa-Antsirabe ny faran’ny herinandro teo. Mipetra-drery izy rehefa tonga eto Madagasikara satria manana trano ao Ambohimiandrisoa izy.
Hatramin’ny fanamboaran-dalana avy dia tsy maintsy hatao amin’ny andro antoandro mba ho hitan’ny mpandalo.
Paris - Frantsa Miha mitombo isa ny voalavo
Miha mitombo isa ny voalavo ao Paris renivohitra Frantsay, naparitak’ireo mpandroaka fako vao maraina ny horonantsary mirakitra izany, sary izay nalaina ny 9 desambra 2016 teny amoron’ny reniranon’i La Seine.